Shiinaha Dhiirrigeliyaha Pyrethroid cayayaanka Pyrethroid Imiprothrin soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Senton
Dhiirrigelinta Pyrethroid cayayaanka Pyrethroid Imiprothrin
Magaca badeecadaMi Imiprothrin
CAS Maya .:72963-72-5
Miisaanka Caanaha:318.37 g · mol
Qaaciddada Molecular17 C17H22N2O4
Pmagaca hage: Imiprothrin
CAS MAYA ： 72963-72-5
Wax soo saarka: 1000ton / sanad
Pyrethroid Imiprothrin waa pyrethroid Sunta cayayaanka. Waa qayb ka mid ah ganacsiga iyo macaamiisha qaarkoodsunta dilaalaabooyinka loogu talagalay isticmaalka gudaha. Waxeey heesataa Wax sun ah oo ka dhan ah naasleyda, laakiin waa waxtar xakamaynta duqsiga. Waxay wax ku ool u tahay baranbarooyinka, qashin-qubka, qudhaanjada, kalluunka qalinka, digaagga iyo caarada, iyo kuwa kale.
Noocan ah Sunta cayayaanka dhexe wax ku ool ah kuma leh Caafimaadka Bulshada.Ku milmi karin biyaha, ku milmi kara dareeraha dabiiciga sida acetone, xylene iyo methanol. Waxay ku sii jiri kartaa tayo wanaagsan illaa 2 sano heerkulka caadiga ah. Inta aan ku shaqeyneyno badeecadan, shirkadeena wali waxay ku shaqeyneysaa alaabooyin kale, sida kaneeco Balaastik, Kaneecada celisa, Dhexdhexaadinta Kiimikada Caafimaadka, cayayaanka dabiiciga ah, Buufinta cayayaanka iyo iwm. Shirkadeenu waa shirkad ganacsi oo caalami ah oo xirfad leh, waxaan ku siin karnaa wax soo saar iyo adeegyo tayo leh.
Ma waxaad raadineysaa soo saare ka-hortagga cayayaanka ee loo yaqaan 'Pyrethroid Imiprothrin Imiprothrin' iyo alaab-qeybiye? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhammaan dawooyinka cayayaanka ee loo yaqaan 'synthetic Pyrethroid cayayaanka' waa kuwo la hubo oo tayo leh. Waxaan nahay Shiinaha Asal ahaan Warshad tayo sare leh Pyrethroid Imiprothrin. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Hore: Dhirta Dabiiciga ah Hormone Gibberellic acid
Xiga: Si aad ah Loo Adeegsaday Cayayaanka Lagu Dilo Qoyska Diethyltoluamide
Tayada Sare ee Pyrethroid Imiprothrin
Si wax ku ool ah looga soo horjeedo Qaar ka mid ah Cayaaraha Digaagga
Azamethiphos Cayayaanka iyo Xannaanada xoolaha
Baranbarooyinka Badeedka Caarada ee Azamethiphos